Turkiga iyo Ruushka oo wada qaadaay howlgalkii kowaad ee dhanka hawada Suuriya ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldTurkiga iyo Ruushka oo wada qaadaay howlgalkii kowaad ee dhanka hawada Suuriya ah
January 18, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Turkiga iyo Ruushka ayaa wada qaadaay howlgalkii kowaad ee dhanka hawada Suuriya ah. [Sawirka: Anadolu]
Moscow-(Puntland Mirror) Ciidamada hawada ee Ruushka iyo Turkiga ayaa howlgalkoodii kowaad oo wadajir ah qaaday oo ka dhan ah maleeshiyada ISIS ee ku sugan gudaha dalka Suuriya, sida maanta oo Arbaco ah uu sheegay sargaal Ruush ah.
Sida uu sheegay sargaalka Ruushka ah oo la dhaho Janaraal Sergey Rudskoy, tiro gaaraysa 36 meelood oo ISIS ku leedahay gobolka Al-Bab ee Suuriya ayay bartilmaameedsadeen diyaaradaha dagaalka ee huwanta ah.
Sergey Rudskoy ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ee Su-24, Su-25 iyo kuwa dagaalka Turkiga ee -16 and F-4, ay ka qeybqaateen howlgalka.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, ayuu sheegay in dhowr duulimaad oo kormeer ah la qaaday oo ku saabsan gobolka la beegsaday.
Rudskoy waxa uu ku qeexay howlgalka mid “aad macquul u ah”.
12-kii bishaan Janaayo, milatariga Turkiga ayaa iclaamiyay in Turkiga iyo Ruushka ay kala saxiixdeen heshiis u ogolaanaya in ay iska kaashadaan howlgalada hawada ee Suuriya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kalafadhigii kowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la fiayaa in uu maanta oo Arbaco ah ka furmo gudaha Muqdisho, sida qorshuhu yahay. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmiya u furi [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland government forces have recaptured Qandala coastal town of Bari region from ISIS fighters on Wednesday, an official said. A security official, who asked not to be named, told Puntland Mirror over phone [...]